IPUBG Mobile ye-PC - Landa iWindows 10 ne-Mac (i-Emulator) - Ungakwenza Kanjani
Ungayithola Kanjani i-PUBG Mobile ye-PC?
Ngabe ufuna ukudlala iPUBG mobile ngqo kwi-pc yakho - iWindows noma iMac?Uma kunjalo, ufike endaweni efanele. Njengalokhu okuthunyelwe, sibhale umhlahlandlela wesinyathelo ngesinyathelo wokudlala iPUBG Mobile ye-PC. Ngakho ake singene.
Iselula ye-PUBG mhlawumbe ngumdlalo owawungezwa okungenani kanye eminyakeni emibili edlule. Sekuyindaba yakuleli dolobha selokhu uTencent wayikhipha ngonyaka we-2018. Umdlalo owenziwe yinkampani yaseChina obizwa ngeTencent imidlalo uthathe umhlaba ngesiphepho ngemuva kokuqeda ukulandwa kwezigidi eziyi-100 ezinyangeni eziyisithupha.
Manje njengoba usunombono omubi wokuthi iyiphi i-PUBG yeselula ake singene kuma-specs womdlalo.
Ukubuyekezwa kweselula kwe-PUBG:
Impi yasebukhosini yeminyaka emibili edlule njengohlobo oluthile ithole ukunakwa yibo bonke abadlali. Kulezi zinsuku, izinkampani ezinkulu ezifana ne-Activision ne-Ubisoft zizama izandla zabo kulolu hlobo olusha, kepha uTencent wakwenza lokho ngaphambili futhi wasungula isisekelo. Inhlanganisela ephelele yemishini yezibhamu namamephu amakhulu aqhubeka nokuvuselelwa njalo ngesizini, ngaphezulu kwalokho ngokuhamba kwesikhathi. Ukukhuluma ngemidwebo kunemidwebo engokoqobo enikezwa ngumdlalo weselula; kunjalo, akubeki thuba lapho siliqhathanisa nezihloko zanamuhla ze-AAA. Uma kuqhathaniswa neminye imidlalo ethuthukile, ichoboza yonke imincintiswano ekhona. Awukho umugqa wezindaba onjalo ungangena futhi udlale noma kunini ngaphandle kokukhathazeka ukuthi indaba ikusa kuphi.
Izinyathelo zokufaka iselula ye-PUBG ku-PC (Ye-Mac):
Vakashela i-iwebhusayithi esemthethweni yeBlueStacksnoma landa ama-BlueStacks ku-Mac yakho ngokuchofoza lapha . I-BlueStacks wuhlelo olukuvumela ukuthi uzenze idivayisi ye-android kudivayisi yakho ye-Mac futhi ikuvumela ukuthi usebenzise zonke izinhlelo zokusebenza ze-android ngaphandle komkhawulo.
Faka i-BlueStacks, bese wenza inqubo yokungena ngemvume ejwayelekile njengoba ungenza ocingweni lwe-android.
Iya ku-Google Play Isitolo bese useshela iselula ye-PUBG bese uyifaka.
Lapho ukufakwa sekuqedile ngokwezifiso ukhiye obophayo ngokuya ngezilawuli zakho zomdlalo.
Izinyathelo zokufaka iPUBG mobile ku-PC (YeWindows):
Okokuqala Udinga ukulanda ifayela le- Isipele se-Android emafasiteleni akho.
Uma isilandiwe futhi yafakwa kwi-Windows pc yakho ungaqala ukulanda i-PUBG ilungele i-Windows pc yakho. Empeleni, uzobona imidlalo ehlukahlukene ozoyifaka, kepha udinga ukukhetha iPUBG Mobile ohlwini bese uqala inqubo yokulanda.
Lapho i-PUBG isilandiwe izofakwa ngokuzenzakalela, sicela ulinde isikhathi esithile kuze kube yilapho ukufakwa sekuqedile. Uma usufakiwe ungalungisa ukhiye obophayo ngokuya ngezidingo zakho bese uqala umdlalo.
Yini iPUBG njengoMdlalo?
Iselula ye-Pubg inguqulo ye-android / iOS yomdlalo odumile we-Player Unknown Battlegrounds we-PC / consoles. Kumahhala ukudlala. Kukhona ne-lite version yeselula / i-PC yomsebenzisi ongenayo i-hardware esezingeni eliphakeme. Ungahle uzibuze ukuthi kungani udlala i-PUBG mobile ku-emulator kunokulanda ngqo kwi-PC. Okokuqala, iPUBG mobile imahhala, lapho inguqulo ye-PUBG ye-PC / induduzo ibiza cishe u- $ 29.99. Isikhathi sakho sokulinda endaweni yokwamukela izivakashi sizokwehla njengoba abadlali abaningi bedlala lo mdlalo njengoba kumahhala. Ukuza kumqondo wegeyimu, kuyimpi yabadlali abayikhulu yasebukhosini lapho abadlali abayi-100 belwa bodwa ukuthola indawo engu- # 1 yokuba ukuphela komuntu osindile. Uzoba sendizeni, bese ngosizo lwamapharashuthi, uzofika ezindaweni ezahlukahlukene ngokwamasu akho.
Kunombuthano omkhulu ovala kuwe. Uma ungekho ngaphakathi kwendilinga, uzoqala ukulahlekelwa yimpilo yakho. Ungasungula amasu afana nokukhempa, ukushesha, ukuphanga. Ukwenza amatende kulapho wena neqembu lakho ninquma ukuhlala endaweni eyodwa bese ulinda abanye abadlali ukuthi beze kuwe. Kufanele unake kakhulu futhi uzwe izinyathelo zezitha. Ukugijimisana nalokho kuphambene nekhempu. Wena nabalingani bakho nizojaha niqonde ezitheni ngaphambi kokuba zikubone bese zibabulala khona manjalo.
Izindlela ezahlukahlukene ku-PUBG Mobile:
Kunezindlela eziningi zePUBG mobile. Ake sidlule kuzo ngamunye ngamunye.
Lapha, uwedwa, ulahlekile esiqhingini esinabantu abangama-99 abakulungele ukukubulala nganoma yisiphi isikhathi esithile. Ungahlela amasu ngokuthola indawo enhle kakhulu enechibi eliphanga kakhulu, kepha kukhona ukulandelana okukodwa kwalokho. Kuzoba nabanye abadlali abazokwazi ngakho, futhi, ngakho-ke uzodinga ukuhlala endaweni uthule kakhulu bese uphanga ngangokunokwenzeka ngaphandle kokuwela kwabanye.
AmaSolos ayindlela engcono kakhulu yokucija amakhono akho, futhi uma udlala nabangani bakho, uzokwazi ukukhombisa ukuthi ungumdlali omuhle kangakanani.
Le inguqulo ejabulisa kakhulu yama-solos ngegama okungenzeka ukuthi uyiqagele kahle. Isimo sihlala sinjalo, kepha amaqembu angama-25 azama ukukuzingela, kepha awuwedwa. Wena nabangane bakho ningahlangana niphikisane nabo, nenze icebo lokuphanga, namasu okuhlasela nibe nesifiso sokuhlasela.
Kungaba ikamu noma ugijimele ukukhetha kwakho, sebenzisa izimoto ukushintshanisa usuke endaweni lapho izidlo eziningi zilambele khona igazi lakho.
3. AmaSolos / squads kumuntu wokuqala
Kuyinketho kunemodi; kunenkinobho ekhoneni elingezansi kwesokudla kwesikrini lapho inikwe amandla, ungagxuma ubheke emuva naphambili usuke kumuntu wokuqala uye kumuntu wesithathu obuka i-engeli; abadlali abaningi bakhetha imodi yomuntu wokuqala njengoba icwilisa kakhulu futhi ikhombisa amandla weqiniso womdlalo.
Awunaso isikhathi esanele? Cabanga ngempi njengenketho. Kufana nosuku lokufa ebalazweni elincane olunolwazi oluphelele, uzowuqeda umdlalo kusenesikhathi, futhi akudingeki ukhathazeke ngokufa njengoba uzovuselelwa ngumdlalo njalo lapho ufa. Ngakho-ke ukudlala nje nokuthuthukisa amakhono akho, lo ngumdlalo ophelele.
5. Umdlalo wokubulala
Le yimodi engcono kakhulu yokuqeqeshwa kwezikhali; nakule modi, awudingi ukukhathazeka ngempilo yakho. Akunamkhawulo. Five v Five, uzolwa nabadlali beqembu elibomvu noma elihlaza okwesibhakabhaka kuya ngeqembu olitholayo. Lola amakhono akho wokudubula ngale modi bese ushaya lawo makhanda kumdlalo wangempela.
Kufana kakhulu nokufa okuhlinzekwe abanye abancintisana nabo, ngakho-ke iningi lenu lizokwazi lo mqondo.
Yini iRoyal Pass Ku-PUBG?
Ukudlula eRoyal kulapho uklonyeliswa ngokudlala. Inama-tiers ayi-100 lapho uzozuza khona izikhumba ngokuya ngesigaba okuso. Udinga ukuqedela kuze kufike ku-100 ukuze uthole konke okuqoqekayo. Kepha qiniseka ukuthi ufinyelela ezingeni le-100 ngokuphela kwesizini; inkathi ihlala inyanga eyodwa kuya kwezimbili.
Kulesi sigaba, uzokwazi ngazo zonke izinhlobo zezikhali i-PUBG mobile okufanele inikele ngazo futhi kufanele ukwazi (lolu hlu luqukethe izibhamu ezinhle kakhulu ongazisebenzisa):
I-AKM:njengoba sonke sazi, i-AKM iyona ehamba phambili kuyo yonke imidlalo; inamandla emizuliswano engama-30, futhi isibhamu singabamba ama-ammo angu-7.62 mm. Uma ulawula iphethini yesifutho bese ushaya i-headshot, uzosibulala ngokushesha isitha.
I-SCAR-L:Ayisebenzi njenge-AKM kepha isathola imisindo yomzimba. Ngisho nalesi sibhamu singahamba imizuliswano engama-30 futhi siphethe i-5.56 mm ammo. Njengoba usayizi wezinhlamvu umncane, umonakalo uzoba mncane.
M416:Awudingi ukulawula iphethini yesifutho njengoba nje nesibhamu sikhafula izinhlamvu emgqeni oqondile. Lesi sibhamu sihamba imizuliswano engama-30 futhi sinamandla angu-5.56mm. Ukudutshulwa komzimba, kanye nama-headshots, kusebenza kahle kakhulu lapho isitha sisondela.
UBeryl M762:Lesi yisibhamu esihle kunazo zonke oyoke usithole echibini lempango; inamandla wamarounds angama-30 nezitolo ezinhlamvu ezingama-7.62mm, kodwa kunento eyodwa iphethini yesifutho eyinselele impela ukuyazi, udinga ukuzijwayeza okuningi kumamodi we-War ne-deathmatch ukuze usazi kahle lesi sibhamu, kepha lapho uzokwazi ukwazi ukusebenzisa amandla wangempela futhi uwasebenzisele inzuzo yakho.
I-AWM:Uthando uhlwitha isitha kude? Hhayi-ke, kungenzeka ukuthi ucabanga ukuthi kuyini ukuthwebula? Uma ukude impela nesitha futhi ufuna ukubulala umgomo, usebenzisa isibhamu se-sniper. Ngosizo lwe-9mm ammo nemijikelezo eyishumi, uzothola amathuba ayishumi okubulala isitha sakho kepha ukuqapha ngokuqapha akuwona wonke umuntu. Kuzofanele uzijwayeze okuningi ukuze ukwazi ukuyazi kahle.
M24:Lokhu kungaba inketho yakho yesibili ehamba phambili lapho ushutha njengoba usayizi wezinhlamvu mncane kune-AWM, futhi ukunemba kuncane kakhulu, kepha akudingeki ukhathazeke ngokulawula iphethini yakho yokufafaza.
Ama-SMG (Submachine Guns):
IMicro UZI incane ngokwedlulele futhi iya kumarandi angama-25 anamandla angama-45 ACP ammo. Akunasidingo sokulawula isifutho sakho; qala ukugijimela ngasesitha ngokuqhumisa isibhamu. Uzothola ukubulala.
UMP45:Lesi sibhamu siyefana ne-UZI kepha asisebenzi kangako phambilini; lesi sibhamu besikade siyintelezi, kepha manje, lapho inkampani isisongela, iyazondwa phakathi kwabadlali abangochwepheshe.
Ezinye izinto odinga ukuzinakekela:
Izinto zokuphulukisa:Ama-Med-kits, ama-Band-aids, Iziphuzo Zamandla, Amathebulethi.
Ukuvikelwa kokulimala:Omakalabethe, Ukuhlala.
Izithuthukisi zezibhamu:Ububanzi, omagazini abengeziwe.
Izici ezingeziwe:Izibhamu Ezivuthayo, Amabhomu.
Nge-PUBG, uthola imephu enkulu; ungazungeza futhi ukanise.
Ngenxa yokuthandwa kwayo, iPUBG inesisekelo esikhulu sabalandeli esenza umdlalo uqhudelane kakhulu futhi ujabulise.
Nge-PUBG, uthola izindlela ezihlukile zokudlala ongazidlala ngokuya ngemizwa yakho.
I-Tencent iphinde yathuthukisa i-emulator ezokusiza ukuthi udlale i-PUBG ku-PC kalula.
Ungase ube umlutha womdlalo uma ungakwazi ukuzibamba.
Ngiyethemba usuthole ukuqondisisa ngomdlalo ngemuva kokufunda lokhu okuthunyelwe. Kufanele uzame ukuzwa impi yasebukhosini; lokhu kuzokusiza ukuthi uthuthukise ukuqonda okuhle nokuxhumanisa izandla. Kepha ngazo zonke lezi zinzuzo, qiniseka ukuthi awuzibandakanyi kakhulu emdlalweni uze ube umlutha. Ngakho-ke, ulindeni? Iya futhi ulande iselula ye-PUBG kwi-PC yakho naku-MAC.
Uma ukuthandile lokhu okuthunyelwe, ngazise ngokuthumela imibono yakho ku-PUBG Mobile, futhi uma unemibuzo mayelana nePUBG Mobile, ifake ebhokisini lokuphawula.
Ungalikhombisa Kanjani Iphesenti Lebhethri ku-iPhone 12?
sakaza ama-movie amasha online mahhala
ukubukela i-netflix nge-vpn
Ungasithola kanjani isaphulelo somfundi ku-spotify premium
skyrim ndawonye usuku oluvulekile lwe-beta
indlela yokwenza amahembe amahle ku-roblox